Warar - Shirka Suuq geynta Qeybta Labaad ee 2020-ka · Deg Deg iyo Cadho
Shirka Suuq geynta Qeybta Labaad ee 2020 · Deg Deg iyo Cadho
8-dii subaxnimo July 5, 2020, Kaihua Mould's 2020 suuq geyntiisa suuq geynta ayaa lagu qabtay waqtigii loogu talagalay hoolka shirarka ee Tongji Huangyan Rural Revalization College.
Wadar ahaan 65 shaqaale suuq geyn ah iyo hogaamiyeyaal sarsare oo ka socda Xarunta Dhexe ee Huangyan iyo Warshada Sanmen ayaa kaqeyb galay shirkaan suuq geynta. Shirka waxaa loo qaybiyey laba mowduuc:
MarketingShirka suuqgeynta rubuca labaad ee 2020
Waxqabadka balaaran ee afaraad "soon iyo xamaasad"
Waqtiyada cajiibka ah ee shirarka suuq geynta
Bilowgii kulanka, waxaa khudbad jeediyay gudoomiye Liang Zhenghua.
Ugu horreyntii, Guddoomiyaha Liang Zhenghua wuxuu la wadaagay xog "Heerka dhammaystirka ee dalabka amarka ee rubuca labaad wuxuu ahaa 101%, waxqabadkuna wuxuu kordhay 35% sannad-sannadeedka." Guddoomiyaha Liang Zhenghua wuxuu si buuxda u xaqiijiyay waxqabadka suuqleyda soo xaadirey rubucii hore wuxuuna muujiyey mahadnaqa qof walba. Kadib wuxuu si qoto dheer u falanqeeyay jawiga suuqa ee hadda jira, wuxuu qof walba u sheegay diiradda iyo jihada shaqada ee rubuca soo socda, wuxuuna soo saaray afar eray oo muhiim ah: "wareeg gaaban", "khibrad macmiil", "wax soo saar hal abuur leh", "macaamiil" lammaanaha ”.
Marka xigta, shaqaale kasta oo suuqgeyn ah ayaa u yimid masraxa si ay uga warbixiyaan soo koobitaanka shaqada ee rubucii hore iyo qorshaha shaqada ee rubuca soo socda.
Gina, Agaasimaha Iibka ee Waaxda Suuqgeynta Shisheeye, ayaa la wadaagey qof walba: “Saamaynta cudurka faafa ee dibedda, bandhigyada qaarkood dib ayaa loo dhigay ama xitaa waa la joojiyey, safarka macaamiisha booqashada ku imaanaysa sidoo kale dib ayaa loo dhigi karaa illaa 2021. Qof kasta oo meesha jooga waa inuu noqdaa dabacsan, la jaanqaadi kara xaaladdooda, oo urursan, iyadoo aan loo eegin Sida loola macaamilo macaamiisha dhan walba!
Hogaamiyaasha sare ee shirkada ayaa mid mid uqaaday masraxa si ay ula wadaagaan dareenkooda rubuca labaad iyo jihada hagaajinta rubuca soo socda.
Liu Qingjun, Madaxweyne Ku-Xigeenka Fulinta ee Xarunta Huangyan
Liang Zhengwei, Madaxweyne Ku-Xigeenka Fulinta ee Warshadda Sanmen
Deg Deg ah & Xanaaqsan
“Di——” Markii la yeeriyo foorida tababaraha, howshaan fidinta ayaa si rasmi ah u bilaabatay.
Waxqabadkaan fidinta ah wuxuu inta badan ka kooban yahay 4 qaybood, "Icebreaker", "Caqab ku Noqo Naftaada: Gawaarida Sare ee Tightrope Walk", "Team 150, Power Circle" iyo "Happy BBQ".
Aynu wada dareensano jawiga diiran ee munaasabadda!
Guushu waxay ka timaaddaa kooxda, kooxduna way iskeed isu fulisaa.
Ciyaarta barafka jabisa waxay si wax ku ool ah u jebisaa caqabadaha u dhexeeya dadka, waxay abuurtaa jawi isgaarsiineed oo wanaagsan, waxayna kicisaa xamaasadda iyo ruuxda dagaal ee xubnaha kooxda.
"Socodka xadhigga xadhigga adag"
Laga soo bilaabo bilowgii rajo buuxda, u socoshada bartamaha meteor, in yar oo ka labalabeynaysa hore u socoshada, iyadoo ay ku hoos jiraan qaylada iyo dhiirigelinta asxaabteyda, iyada oo loo marayo marxaladii ugu adkayd, iyadoo laga ogaanayo muuqaalka fog, qaadida tallaabo adag, kuna soo dhowaanaya dhamaadka tallaabo tallaabo. Gaaritaanka himilooyinka oo naftaada la tartan.
"Kooxda 150, Wareega Awoodda"
Qeybinta shaqada, dhiirigelinta labada dhinac, kalsoonida labada dhinac, khibrad soohdinta u dhexeysa suurta gal iyo wax aan macquul aheyn
Habeenku markuu yimaado, jawigu weli waa diiran yahay
"BBQ Happy" ayaa ku dhawaaqay furitaanka
Kaihua Hummingbirds oo aad uga fog buuqa iyo buuqa magaalada
Si buuxda ugu mahadnaq jawiga cajiibka ah ee isku imaatinka kooxeed ee dabeecadda
Iskaashi oo naftaada la tartan
In kor loo qaado riyada kooxda iyo isfahamka labada dhinac iyo kalsoonida xubnaha kooxda
Wadajir ahaan, kooxdu waa kooxda
Waad ku mahadsantahay kulanka